Suxuf Yoonis Cali Nuur Oo Ku Geeriyooday London Iyo Madaxweyne Muuse Biixi Oo Tacsi U Diray – somalilandtoday.com
Suxuf Yoonis Cali Nuur Oo Ku Geeriyooday London Iyo Madaxweyne Muuse Biixi Oo Tacsi U Diray
(SLT-Hargeysa)-Alle ha u naxariistee wariyihii ruug caddaaga ahaa ee Yoonis Cali Nuur ayaa ku geeriyooday magaalada London ee carriga Ingiriiska sida uu BBC-da u xaqiijiyay wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo.
Yoonis oo hadda ahaa la taliyaha wasiirka warfaafinta ayaa muddooyinkii u dambeeyay xanuunsanayay waxaanu hadda muddo bil ah ugu maqna Ingiriiska arrimo caafimaad isaga oo dhakhtar halkaasi ku yaal ku geeriyooday.
Yoonis ayaa wakhti dheer ka soo shaqaynayay saxaafadda isaga oo horraantii 1970s ku biiray idaacaddii Radio Muqdisho markii dambena 1983 ku biiray idaacadda BBC-da oo uu ka shaqaynayay ilaa afar sanno ka hor uu beeshan ka noqday. Waxa uu sanadihii u dambeeyay Somaliland ka qabanayay arrimo dhanka saxaafadda ah oo aqoon korodhsi u badan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane. Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa, ka dawladda iyo ka shacbiga Somaliland, waxa uu tacsi u dirayaa, bahda saxaafadda, waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Weriye Yoonis Cali nuur oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 20/07/2018, dalkaIngiriiska.